Wadayaasha Gawaarida SEW EURODRIVEGEAR Motors qaybiyeyaasha helicoidales
SEW eurodrive gearmotors iibka ah
Meel lagu helo khibradna lagu doorto Baabuur-wadaha SEW
Baabuur wadaha SEW oo wata Gawaarida
Mawaxaad raadineysaa shirkad qaybiya si aad u soo iibsato Baabuur wadayaasha SEW?
Marka hore, annaga waxaad ka iibsan kartaa matoorro servo ah (tusaale ahaan SEW) iyo, haddii loo baahdo, soo-wareejin ku habboon qiime macquul ah. Midda labaad, xalalku waa mid ka mid ah laba qeybiyeyaal oo muhiim ah oo loogu talagalay wax soosaarka SEW EURODRIVE.Seiko, tayo xirfadeed. Dambe, hufnaanta sare, isticmaalka tamar yaraanta, qulqulka sareeya, dhawaqa hoose
Gawaarida Helical Gear ee Cagta
Waxaan u qaadanaa tayo ahaan sida faa iidadeena oo qiimaha ugu hooseeya uu yahay daacadnimo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waan ku faraxsanahay inaan ku caawino! Adeegga macaamiishayadu waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee 24 saacadood khadka tooska ah. Cusub ama Surplus SEW EURODRIVE MDX61B. Darawalka guud ee loo yaqaan 'USB11A'.
Moodooyinka casriga ah
tolo sanduuqyada qalabka eurodrive, iibiya alaabada geeya miciishadaha, qaybinta eurodrive, jumladleyda tolo euroda, seega eurodrive. DriveGate - SEW-EURODRIVE Xariirka Macaamiisha Internetka ee Internetka.
Qalabka lagu yaqaan 'gearmotor gear' waa unug isku-dhafan oo isku-dhafan oo ka kooban cutubka qalabka iyo mootada. Tiknoolajiyadda wadista korantada sida la soo saaray.MDX61B: Inverter loogu talo galay matoorrada dabiiciga ah ee AC-ga oo leh ama aan lahayn jawaab celin ku-meel-gaar ah, ama loogu talagalay asynchronous iyo servomotors synchronous.
Waxaan nahay shirkad la aasaasay oo ah matoorrada korantada Warshadaha tayo leh.
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, oo qiime jaban leh. Sanado khibrad soo saarista gawaarida ah oo kaliya si ay kuu siiso umeerin tayo leh oo waara. Injineerka Mootada iyo Gear wuxuu sameeyaa Dayactirka Gearbox, dib u habeynta iyo dib u dhiska adeegyada. Kaaliyaha Codsiga Macaamiisha ee Caawinta Qalabka SEW Eurodrive Gearboxes & Gearmotors.
Su'aal ku saabsan tolidda dareewalka, Fadlan xor u tahay inaad nala soo xiriirto.
Haddii aad haysatid alaabada aad ugu jeceshahay, kaalay oo nala soo xiriir! Waxaan diyaar u nahay isla markaana sugeynaa iskaashigeenna.
U soo dir su'aalahaaga hadda waannu kugu soo laaban doonnaa si dhakhso leh.